Ibhlogi-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kwembonakalo kunye nabaGwebi beebhenki
Disemba 23, 2017 Khetha, ithembaUshiye uluvoLazaro Cardenas
Ukuba ukhe wazibuza ukuba ingaba ufuna ukuthembana okanye hayi, awuwedwa. Zininzi iimbono eziphosakeleyo malunga nokuba kutheni kwaye kutheni wenza ukuthembana. Ke kukho umbuzo wokuba loluphi uhlobo lokuthenjwa endiludingayo? ...
Ndiva lo mbuzo malunga nee-2 ngeveki. Kwaye njengawo nawuphi na umbuzo owubuza igqwetha, impendulo yile: "Mhlawumbi" Impendulo esemthethweni iqala phantsi ihlala ilawula amalungelo ...
Novemba 10, 2017 Ukuchithwa1 CommentNguJohn Anderson
Ukuba ufumene isaziso sokusilela emva kokuphosa intlawulo yokuhlawulwa kwemali-mboleko, oko akuthethi ukuba indlu yakho iya kuchazwa kwangaphambili. Usenako ukuthatha i ...
Uncedo lwasemva kokubanjwa-Indlela umntu aphikisana ngayo ne-PCR kunye nokubonisa ukungasebenzi ngokufanelekileyo kwesiluleko kwabamangalelwa abajamelene nokugxothwa eNew Jersey.
Igqwetha elitsha lokufudukela kwelinye ilizwe laseNew Jersey licacisa ukukhululeka kunye nohlangulo emva koxolelo (PCR)
[youtube id = "mwX4tnkGYus" wide = "600" urefu = "350" autoplay = "no" api_params = "" class = ""
Ngaphakathi koRhulumente ...
Disemba 4, 2019 KhethaUshiye uluvoAndres Cardenas
Wonke umntu uyafa. Nangona kunjalo ayinguye wonke umntu olungele ukufa. Kwaye nokuba umntu ukulungele ngokwasemphefumlweni ukusweleka, oko akuthethi ukuba iimpahla zakhe zikwimeko entle ...